Wadooyinka waa weyn ee magaaladatan Nairobi oo isbuucan lagu wado in la xiro – The Voice of Northeastern Kenya
Wadooyinka waa weyn ee magaaladatan Nairobi oo isbuucan lagu wado in la xiro
Wadooyinka waa weyn ee ku yaala magaala madaxda waddankan Kenya ee Nairobi ayaa lagu wada in isbuucan la xiro iyado lagu wado in Nairobi u si rasmi ah uga furmo shirka caalamiga ee ganacsiga ee TICAD.
Xoghayaha wasaarada arrimaha gudaha iyo iskuduwida ammaanka qaran Amos Gathecha ayaa waxa u sheegay in wadooyinka la xirayo ay kamid yihiin City Hall Way, Parliament Road, Harambee Avenue, Taifa Road iyo wadooyinka ka agdhaw hoteelada Hilton iyo Intercontinental.
Mr Gathecha oo sidoo kale kamid ah madaxda gudiga loo xil saaray shirkan ganacsi ayaa waxa u sheegay wadooyinkan loo yaqaano wadooyinka cas in si rasmi ah lo xiri doono 25-ta biisha August ee sanadkan 2016-ka waxana dib loo furi doona saqda dhexe ee habeenimada 29-ka ee isla biishan.
Waxana taas micneheedu ay noqoneysa in gawaarida isaga kala goosha xafada Community,yaya Centre iyo Hurlingham in goobta laga raaco gawaarida dhinacaas aado aysan u suurta gali doonin in laga raaco goobta gawaaridaas laga raci jiray ee Kencom waxana u Mr Gathecha sheegay in dadka isticmaali jiray goobtaas ay si ku meel gaar ah u isticmaali doonan wadada Moi Avenue.
← Booliska waddanka Iraq oo qabtay wiil isku soo xiray aaladaha qarxa
Golaha odayaasha beesha Luo oo dalbaday 34 milyan →